Liberalerna: ha la dedejiyo go'aanada magangeliyada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: Jessica Gow / TT, Ludvig Thunman / TT
Liberalerna: ha la dedejiyo go'aanada magangeliyada
La daabacay onsdag 27 januari 2016 kl 16.47
Liberalerna ayaa maanta soo bandhigay hindiseyaal cusub oo lagu yareynayo xilliga la sugo go'aanada mangeliyda. Xisbiga ayaa ku taliyey in loo abuuro qaxootiga suuriyaanka ee ku sugan Sweden loogu dedejinayo go'aanada magangliyada.
Go'aanka ah degaansho in la siinayo waa in ay ku helaan saddex billood ayuu yeri hogaamiyaha Leberalerna Jan Björklund:
- Dhamaan dadka ka soo cararaya Suuriya oo cadeyn kara in ay Suuriya ka yimaadeen, oo ka soo gudba kontoroolka hey'adda amniga ee Säpo, maanta waxaa la siiyaa deganaansho ku meel gaar ah. Marka ma jirto sabab ay u sii deganaadaan xaruumaha qaxootiga muddo labo sanno ah oo laga hor istaago in shaqeystaan, ayuu yeri.
Liberalerna ayaa doonaya in si kumeelgaar ah loo baddelo hanaanka racfaan ka qaadashada go'aanada magangeliyada. Maanta dhamaan dadka laga siiyo diidmo waxay xag u leeyahiin in ay racfaan ka qaataan go'aankas diidmada ah saddex todobaad gudahood. Balse Leberalerna ayaa doonaya in racfaan qaadashada lagu xiro in marka hore ogalaan.
- Badanaa dadka diidmada laga siiyo magangeliyada racfaan ayey qaataan. Taas oo qarash iyo waqti badan maanta ku baxo, halka qofkii uu iska fadhiyo xeryaha qaxootiga. Dabcan way dhaci kartaa in kiisas qaarkood wax ka qaldameen, laakiin inta badan go'aanada diidmada ee laga gaaro waa kuwo sax ah. Marka waxaa haboon racfaan qaadashada lagu xiro marka hore ogalaansho oo maxkamada go'aan ka gaarto in kiiska sidaas ku xiran yahay ama ay tah in la gudogeli karo, ayuu yeri.